သင်၏ဘဝ၌ဥအာဟာရလိုအပ်သည် - အစားအသောက်
ရုပ်ရှင်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း Celeb ကြည့်ပါ နည်းပညာ အလုပ်အကိုင်များနှင့်ငွေကြေး သတင်း ချက်ပြုတ်နည်းများ ကျွမ်းကျင်သူကိုမေးပါ အသိပညာ & ပညာရေး သူငယ်ချင်းများနှင့်မိသားစု Gynaec
သင်နှစ်သက်သောအစားအစာသည်သင့်အတွက်လည်းကောင်းသည်ဟုအကြိမ်မည်မျှပြောသနည်း။ ဘယ်တော့မှနီးပါးညာဘက်? သင်ကြက်ဥ၏အဆင်ပြေခြင်းနှင့်ဘက်စုံသုံးကိုခစျြခဲ့လျှင်, သင်မှန်အစာစားခြင်းခံခဲ့ရ! သငျသညျကြက်ဥအစာအာဟာရသို့နှိပ်ခဲ့ကြရတယ်! ဥများသည်အာဟာရပြည့်ဝသောအစားအစာများဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာဥသည်အာဟာရကိုသင်၏အစားအစာတွင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည်။
အိန္ဒိယလူမျိုးများနှင့်ကမ္ဘာအနှံ့ရှိလူများအတွက်ကြက်ဥသည်အဟာရဓာတ်ဖြစ်သည်။ မနက်စာအတွက်မဟုတ်ပါဘူး , ဒါပေမယ့်လည်းနေ့လည်စာ, ညစာနှင့်မုန်အသွင်ပြောင်းနှင့်အရသာနှင့်ချိုမြိန်ဟင်းလျာများအတွက်ပါဝင်ပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုခံရဖို့။ စင်စစ်အားဖြင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိလမ်းများပေါ်တွင်ငရုတ်ကောင်းနှင့်ဆားဖြန်းထားသောကြက်ဥများရောင်းသည့်လှည်းများကိုမကြာခဏတွေ့ရတတ်သည်။ ကြက်ဥအဟာရသည်သင်၏အစားအစာကိုပိုကောင်းအောင်တိုးမြှင့်ရန်အတွက်ငွေရေးကြေးရေးအရလွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ကြက်ဥအဟာရနှင့် ပတ်သက်၍ သိရန်လိုအပ်သည်မှာ -
၁ ။ ကြက်ဥအဟာရကိုလျှော့တွက်။ မရပါ
၃ ။ ဥအာဟာရကိုရောဂါကာကွယ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ထားသည်
၅ ။ ဥအာဟာရ - ၎င်းကိုသင်၏အစားအစာထဲသို့မည်သို့တည်ဆောက်ရမည်နည်း
၆ ။ ဥအာဟာရ - မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
ကြက်ဥသည်အာဟာရအများဆုံးအစားအစာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည် ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာလိုအပ်သောအာဟာရအနည်းငယ်နီးပါးပါရှိသည် ။ ကြက်ဥအဟာရသည်သင်၏ဘ ၀ တွင်လိုအပ်သောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤအာဟာရဓာတ်များအပြင်ကြက်ဥတစ်လုံးသည်ဗီတာမင်များ (D, E, K, B6)၊ ကယ်လစီယမ်နှင့်သွပ်ဓာတ်များစွာသိုလှောင်ထားသည့်သိုလှောင်ရုံတစ်ခုသာမကအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောအရည်အသွေးမြင့်ပရိုတင်းများနှင့်ကောင်းမွန်သောအဆီများလည်းပါဝင်သည်။ ဥများသည်ကိုလက်စ်၏ကောင်းသည့်အရင်းအမြစ်လည်းဖြစ်သည်။ ကိုလင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိဆဲလ်အမြှေးပါးများကိုတည်ဆောက်ရာ၌အသုံးပြုသောအရေးပါသောအာဟာရဖြစ်သည်။ ဒါ အာဟာရကူညီပေးသည် ဦး နှောက်ထဲမှာအချက်ပြမော်လီကျူးများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဥတစ်လုံးဟာ ၁၀၀ မီလီဂရမ်ကျော်တဲ့ကိုလက်စ်အပြည့်ပါ ၀ င်တယ်။
ဥတစ်လုံးသည်ပရိုတင်း ၆ ဂရမ်နှင့်ပြည့်နေသည်။ ပရိုတိန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးရန်အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောတစ်သျှူးများနှင့်မော်လီကျူးများကိုအလုပ်လုပ်ရန်နှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်အလွန်လိုအပ်သည်။ ကြွက်သားထုထည်တိုးပွားစေရန်၊ သွေးပေါင်ချိန်ကျဆင်းစေရန်၊ အရိုးတို့၏ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီးကျွန်ုပ်တို့ကိုပင်ကူညီရန်ပရိုတိန်းလိုအပ်သည် အကောင်းဆုံးအလေးချိန်ကိုထိန်းသိမ်းရန် ။ ပရိုတိန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကြီးထွားစေသည် ခိုင်ခံ့သောလက်သည်းများနှင့်ဆံပင် ကူးစက်ရောဂါများကိုတိုက်ဖျက်ရန်။ လက်ရှိတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျန်းမာရေးနှင့်ကြံ့ခိုင်မှုအတွက်ပရိုတိန်းအနည်းငယ်သာရရှိသည်ဟုယူဆကြသောကြောင့်ကြက်ဥသည်ပရိုတင်းဓာတ်အားပေးစက်ရုံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကျေးဇူးတင်ရပေမည်။ ကံအားလျော်စွာကြက်ဥများတွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအမိုင်နိုအက်ဆစ်များသည်မှန်ကန်သောအချိုးအစား၌ရှိသည်၊ ၎င်းသည်သင်၌ပါ ၀ င်သည့်ပရိုတိန်းများကိုကောင်းစွာအသုံးချနိုင်စေသည်။
ထို့အပြင်ကြက်ဥအနှစ်များတွင်လည်းကျန်းမာသန်စွမ်းသည့်အဆီများပါဝင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်ဗီတာမင်များနှင့် antioxidants စသည့်အာဟာရများကိုစုပ်ယူနိုင်အောင်ကူညီပေးသည်။ ထို့အပြင်စိတ်မပူပါနှင့်။ ချက်ပြုတ်ခြင်းမှအပူသည်မပျက်စီးစေပါ ကြက်ဥအတွက်ကျန်းမာအဆီ ။
သိကောင်းစရာ : ကြက်ဥတစ်ခုအတွင်း ကြက်ဥအနှစ် ပရိုတိန်းအဖြူနီးပါးလောက်များများပါ ၀ င်သဖြင့်ကောင်းသောပရိုတိန်းများရရှိရန်ကြက်ဥတစ်လုံးလုံးစားပါ။
Image: Baljeet Singh / Pixabay
ကြက်ဥများသည်နှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကိုလျော့နည်းစေသည်။ လေ့လာမှုများတွင် ကြက်ဥစားသုံး LDL အမှုန်များ၏ပုံစံများသည်သေးငယ်သော၊ သိပ်သည်း။ မကောင်းသောနှလုံးသားမှ LDL ကိုလက်စထရောမှနှလုံးရောဂါဖြစ်နိုင်ချေကိုလျော့နည်းစေသည့် LDL သို့ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။
ဥများတွင်မျက်စိကျန်းမာရေးကိုအကျိုးပြုသည့် antioxidants များပါ ၀ င်သည်။ မျက်လုံး၌အိုမင်းခြင်းနှင့်ဆက်နွှယ်သောဆုတ်ယုတ်ကျဆင်းသွားသည့်ဖြစ်စဉ်များကိုတားဆီးရန်အထောက်အကူပြုသောအာဟာရဓာတ်များစွာတွင် lutein နှင့် zeaxanthin များပါဝင်သည်။ Lutein နှင့် Zeaxanthin ကိုစားသုံးခြင်းဖြင့်မျက်စိအတွင်းတိမ်နှင့်မျက်စိအတွင်းတိမ်ယိုခြင်းကဲ့သို့သောအဖြစ်များသည့်မျက်စိရောဂါများကိုလျှော့ချရန်လေ့လာမှုများတွင်ပြသခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ကြက်ဥတွင်ရှိသောဗီတာမင်အေသည်မျက်စိကွယ်ခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဤဗီတာမင်ဓာတ်ချို့တဲ့ခြင်းသည်မျက်စိကွယ်ခြင်းကိုဖြစ်စေသည်။
ဥအာဟာရ - ၎င်းကိုသင်၏အစားအစာထဲသို့မည်သို့တည်ဆောက်ရမည်နည်း
အိန္ဒိယ၌ဥများစွာစားသုံးရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည် ဥ bhurji (အထက်) ဥ မင်္ဂလာပါ (များသောအားဖြင့် minced အသားနှင့်), ကြက်ဥ မလာလာ , ကြက်ဥ biryanis, ကြက်ဥ koftas (နာဂစ်စီ Cardigan [အောက်တွင်] အိန္ဒိယပြည်နယ်တိုင်း၌ကွဲပြားခြားနားသောကြက်ဥဟင်း။ )
တကယ်တော့ပြည်နယ်အတော်များများတွင်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အထူးနည်းလမ်းများရှိသည် ဥနှင့်အလုပ်လုပ်ခြင်း - ထို ros omelets Goa ၏, အ Kerala ကြက်ဥကင်, အံ့သြဖွယ်ပင် baida roti အဲဒီတိုင်းပြည်အနှံ့တွေ့ရှိရသည်။ Parsis ဟာပန်းကန်ပြားထဲကိုဥတွေထည့်တာကိုနှစ်သက်တယ် akuri) နှင့်ဤမျှလောက်များစွာသောရှိပါတယ် သီဟ မီနူးတွင်ကြက်ဥများသာရှိသည်ဟုတိုက်ကြီးတစ်လွှား (အစားအစာလှည်းများ) - ထိုအာဟာရစွမ်းအားသည်မည်မျှဘက် လိုက်၍ ဖြစ်သည်။
ပုံ - DanaTentis / Pixabay
ကမ္ဘာသို့ထွက်သွားသည့်အခါဥသည်တောက်ပရန်အခြားနည်းများကိုရှာဖွေသည် shakshuka (အထက်) အရှေ့အလယ်ပိုင်းမှာ menemen တူရကီ, ကြက်ဥ Benedict (အောက်) ယူကေရှိ Scotch ဥများ၊ Huevos Rancheros မက္ကဆီကိုတွင်၊ သီရိလင်္ကာရှိကြက်ဥတူးဖော်သူများ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ Croque Madame နှင့်နယူးဇီလန်နှင့်သြစတြေးလျမှ pavlovas တို့ဖြစ်သည်။ အဆိုပါစာရင်း, အဆုံးမဲ့ဖြစ်ပါသည်, ဟင်းလျာများအရသာရှိပါတယ်, ငါတို့သည်သင်ယခုကြက်ဥတက်ကြော်သွားကြဖို့မစောင့်နိုင်သေချာပါတယ်!
ထိပ်ဖျား: အပတ်တိုင်းကြက်ဥဟင်းလျာများကိုလေ့လာပါ shakshuka ?
ဥအာဟာရ - မကြာခဏမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
လက်စထရော -In- ဥဥပြissueနာတစ်ခုလုံးကော။
TO သို့။ ကြက်ဥများသည်နှစ်များတစ်လျှောက်ဆိုးရွားသည့်ဖိစီးမှုကိုခံစားခဲ့ရပြီးအထူးသဖြင့်ကိုလက်စထရောနှင့်ဆက်စပ်သည် ။ အဲ့တာကိုယုံကြည်ခဲ့လို့အချိန်အတန်ကြာအထိငါတို့ရှိသမျှသည်ကြက်ဥအဖြူကိုသာစားခဲ့သည် ကြက်ဥအနှစ်ပါရှိသည် ကိုလက်စထရောနှင့်စားသုံးရန်ကျန်းမာရေးနဲ့မညီညွတ်သောခဲ့ကြသည်။ ဟုတ်ကဲ့၊ ကြီးမားတဲ့ကြက်ဥတစ်လုံးမှာ ၂၁၃ မီလီဂရမ်ပါဝင်တဲ့ကိုလက်စထရောပါဝင်တယ်။ ၎င်းသည်အကြံပြုထားသည့်နေ့စဉ်ကန့်သတ်ချက်၏သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ဥများမှာကိုလက်စထရောများပါ ၀ င်သော်လည်းမြင့်မားသောသွေးတွင်းကိုလက်စထရောသည်အဓိကအားဖြင့်ကြက်ဥကြောင့်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ကြောင်းထင်ရှားလာသည်။
၎င်းသည်ပြည့်ဝသောအဆီဖြစ်ပြီးအဆီပြည့်ဝသောနို့ထွက်ပစ္စည်းများနှင့်အဆီအသားများကဲ့သို့သောအစားအစာများမှ အစပြု၍ သွေးတွင်းကိုလက်စထရောအပေါ်များစွာသက်ရောက်မှုရှိသည်။ သို့သော်လူအများစုကကြက်ဥကိုစားခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကွဲပြားခြားနားစွာတုံ့ပြန်ကြသည်။ အများစုမှာ (၇၀ ရာခိုင်နှုန်းခန့်) သည်ဥများကိုစားခြင်းတွင်ကိုလက်စထရောတိုးပွားလာခြင်းမရှိကြောင်း၊ အခြား ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း (hyper hyperponders ဟုလည်းခေါ်သည်) တွင်ကြက်ဥကိုစားခြင်းသည်စုစုပေါင်းကိုတိုးစေနိုင်ပြီး LDL ကိုလက်စထရောတိုးနိုင်သည် အနည်းငယ်။ သင်စိုးရိမ်ပူပန်ပါကအကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာသည်သင်၏ဆရာဝန်သို့မဟုတ်အာဟာရဓာတ်ပြည့်ဝသောအဆီပါဝင်မှုနှင့်ကိုလက်စထရောအကြောင်းပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည် သင့်ရဲ့အစားအစာ၌တည်၏ ။ အကယ်၍ သင်သည်မြင့်မားသောကိုလက်စထရောနှင့်ပြproblemsနာရှိပါကသင်၏ဆရာဝန်၏အကြံဥာဏ်ကိုရယူပါ။
ပုံ - Monicore / Pixabay
TO သို့။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာပုံးထဲရှိသက်တမ်းကုန်ဆုံးမည့်နေ့ကိုကြည့်ခြင်းဖြစ်သည်။ သင်သည်သင်၏ဥများကိုဆုံးရှုံးလိုက်သည်နှင့်ဝယ်ယူပြီးလျှင်၎င်းတို့ကိုရေထဲထည့်ပါ။ အကယ်၍ သင်၏ဥသည်နစ်မြုပ်ပါကကြက်ဥအသက်အရွယ်ကြီးလာသည်နှင့်အမျှလေထုအတွင်းရှိဆဲလ်အရွယ်အစားတိုးများလာသဖြင့်၎င်းသည်အဟောင်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။
TO သို့။ ကြက်ဥကိုင်တွယ်ခြင်းနှင့်သိုလှောင်ခြင်းတွင်အခြေခံသန့်ရှင်းရေးကိုလိုက်နာရန်အရေးကြီးသည်။ ကြက်ဥများကိုအသား၊ ကြက်၊ ပင်လယ်စာနှင့်နီးကပ်စွာမထားရန်သေချာစေပါ။ သင်ကြက်ဥနှင့်အစားအစာများကိုဥများနှင့်ချက်ချင်းအစေခံရန်သို့မဟုတ်ရေခဲသေတ္တာထဲတွင်သုံးရက်အတွင်းစားသုံးရန်သေချာစေပါ။ အက်ဥများသို့မဟုတ်ရေခဲသေတ္တာထဲမှနှစ်နာရီကျော်ကြာသောဥများကိုမသုံးပါနှင့်။ ကြက်ဥများကိုကောင်းစွာချက်ပြုတ်ခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ ငယ်ရွယ်သောသို့မဟုတ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက်အစားအစာများပြုလုပ်လျှင်၎င်းသည်ဆော်လမွန်အဆိပ်သင့်မှုအန္တရာယ်မှရှောင်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ သင်၏ဥများကိုသူတို့ထဲရှိသူများကိုပုံးထဲထည့်ထားခြင်းကသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးပြီးအားကောင်းသောအနံ့နှင့်အရသာများကိုစုပ်ယူခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်။ ကြက်ဥတစ်လုံးရောက်တိုင်းကုန်ဆုံးသည့်ရက်ကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ ကြက်ဥများကိုဗဟိုထားရန်အတွက်ဘေးထွက်ကြီးများနှင့်အတူဥများကိုသိုလှောင်ရန်သတိရပါ။
ကြည့်ပါ။ အိမ်တွင်အာဟာရပြည့်ဝစေသော passionfruit pavlova ကိုပြုလုပ်ပါ !
Categories ဒိုင် ဆံပင် ထုတ်ကုန်များ
downton Abbey နဲ့တူပြသထားတယ်